Koh Chang, futhi Chang, itholakala empumalanga Thailand, eduze Cambodia. Waziwa emabhishi ayo emangalisa nge isihlabathi esimhlophe, sizungezwe ehlathini ashisayo, ubuhle ngendlela emangalisayo imifula nezimpophoma. Uma ukhetha uhlobo ukuvakashela kule ndawo, abantu bendawo kanye izivakashi ingqalasizinda uzokwenza iholide lakho ongenakulibaleka.
Kuleli qophelo, ukubona izivakashi isabelomali futhi izilaleli ocebile. Kule yakamuva, kukhona aphambili Amahhotela okunethezeka nge emabhishi ayo, ngoba owokuqala - Bungalows elula enophahla we straw. Nakuba, kungakhathaliseki ukuthi unquma ukuhlala, ukuvela okuningi omuhle, usuke okuqinisekisiwe, ngoba okushiwo ukuzilibazisa wendawo akulona prosizhivanie evamile emahhotela, ngisho ikilasi lokuqala. amanzi Azure, langa amabhishi, futhi umoya ohlanzekile kuphela abazokwazi ukwenza okungenani kudingekile, okuyilona elidingekayo ukuze ku idolobha izivakashi ezinjalo. Futhi kukhona zonke izimo ezidingekile nokokuzilibazisa abantu babo bonke ubudala, kuhlanganise nezingane.
Namuhla sibheka amahhotela best Koh Chang, isilinganiso zazo lapha ngenzansi.
13. Ihhotela Panviman Koh Chang Indawo abantu abajwayele ukuvakasha
Amahhotela Uma ucabangela Koh Chang "izinkanyezi 4", ivelele leli hhotela. Koh Chang Indawo abantu abajwayele ukuvakasha inikeza amakamelo yesimanje ogwini "Klong Prao Beach", okuyinto kubhekwa ingxenye Marine National Park eGulf of Thailand. Kukhona yokudlela futhi ichibi ongaphandle.
I amakamelo ehhotela sihlanganise nempahla lesimanje lokubhalela zakudala Thai. Zonke anemisila cable TV ne-TV flat-screen kanye ibhokisi idiphozi ukuphepha DVD-player. zokugeza nge zokugeza kanye ubhavu.
Ukukhetha amahhotela e Koh Chang, ukulalelisisa, ukukhumbula lokho kule ndawo, izivakashi ukukutholela ku ezikhethekile ukuqina isikhungo noma spa, jabulela massage Thai. I ithala omkhulu ilungele ejabulela ukubukwa olwandle ilanga. The yokungcebeleka futhi inikeza igumbi play yezingane kanye nezinto ezidingekayo ukuze ezihlukahlukene amanzi ezemidlalo.
Kufanele kuphawulwe ukuthi endaweni yokudlela yalapho ukukhonza cuisine omhlaba kanye Thai usuku lonke. A ezihlukahlukene ukudla okulula futhi cocktail asizwa ibha etholakala lapha. Ekamelweni lokudlela has ukubukwa emangalisa kolwandle, njengoba kufakazelwa Izibuyekezo eziningi. Ngaphambi Panviman kuyona Koh Chang engafinyelelwa ngebhasi, kulandela umzila Bangkok - Trat ke ukuba Koh Chang ngesikebhe.
12. Ihhotela Banpu Koh Chang Indawo abantu abajwayele ukuvakasha
Amahhotela Uma ucabangela Koh Chang "izinkanyezi 3", wukuhlinzeka ehhotela Banpu Koh Chang, okuyinto etholakala eduze lolwandle ngokuthi White Sand. Lapha, amasevisi izivakashi kukhona yokuhlala amahle kuvulandi ayo futhi asezindongeni sokhuni ebhishi yangasese. Phakathi nazo zonke ezinye izindawo ukuhlinzeka ongaphandle indawo yokubhukuda ngogodo futhi umbono omkhulu kolwandle. Zonke amakamelo sizungezwe izimfunda eziluhlaza zasemazweni ashisayo. Bonke babe air conditioning. Ngaphezu kwalokho, anawo izivakashi ithelevishini, ikhofi / itiye futhi iphephile.
Amahhotela Abaningi e Koh Chang linikeza izivakashi zayo isevisi massage eziphumulele. Le ndawo yokudlela iyathinteka. Lapha ungakwazi futhi uthathe uhambo Snorkelling eyayihlelwe edeskini uhambo. izisebenzi ehhotela ngenkokhelo lizohlinzeka ngomsebenzi Shuttle kuya / kusuka esikhumulweni sezindiza, ungakwazi ukusizakala service izingubo. Ukwahlulela ukubuyekezwa, ezivulekile yayo yokudlela esibheke emangalisa kwenkundla ezishisayo esimweni esikhululekile futhi ukhonza cuisine omhlaba kanye Thai, kwasolwandle sha.
Lokhu resort kuyinto drive ngomzuzu-nanhlanu kusukela Koh Chang. Indlela eya Ao Thammachat kuthatha imizuzu engaba ngu-45. Kulokhu, sezindiza edolobheni angafinyelelwa ngesikebhe nemoto nemizuzu engu-45.
11. Ihhotela Keeree Ele kuyona, Koh Chang
Amahhotela, izithombe zazo okwethulwa kulesi sihloko, nazi egcwele ezihlukahlukene. Leli hhotela spa inikeza ukufinyelela yokuthopha internet, yokupaka yangasese, ubhavu ashisayo futhi yokubhukuda. Vala imigoqo kanye zokudlela.
Amakamelo yesimanje anemisila minibar air conditioning futhi izici yokugezela yayo siqu zokugeza free. Ukwahlulela ukubuyekezwa, ngamunye wabo kuvulandi ayimfihlo ukubukwa emangalisa olwandle noma ezintabeni. Yokudlela wendawo ukhonza bendabuko ukudla Thai, uzilungiselele nemikhiqizo ahlukahlukene zonyaka. Lokhu resort itholakala amamitha angamakhulu amathathu ebhishi, eyaziwa ngokuthi "Uayt Thumela Beach".
10. Ihhotela Aana Resort & Spa
Ufuna emahhotela aphambili e Koh Chang, sibheke le ndawo. Itholakala kwi Klong Prao. Izivakashi inikeza amakamelo yesimanje, lapho ezibheke indawo yokubhukuda, umfula, entabeni noma engadini imibono. Kanti inikeza spa nezinketho 5 yokudlela.
Amakamelo ivulekile sezifakelwe yokudlela endaweni yokungcebeleka, kuvulandi yangasese, i-TV, usofa. Izindlu zangasese zanamuhla shower nokugeza. Ezinye amakamelo futhi babe ichibi elincane yangasese.
Izivakashi bazokwazi ukukhwela kayak zibhukude pool ongaphandle ehhotela, ngaphezu, uhambo, lapho ungajabulela ebumnyameni izinambuzane elikhanyayo flying. Futhi uzinake liwukuthi isikhungo kukhona isikhungo imfanelo kanye shop unikeza izipho eyingqayizivele.
Esikhundleni yokudlela ikhonza izitsha okumnandi Thai, njengoba kungabonwa yiwo wonke ukubuyekezwa. I Cinnamon yokudlela, etholakala eduze komfula, ukhonza cuisine international kanye izibiliboco zendawo. Zonke izinhlobo iziphuzo ayatholakala ezintathu Amabha isikhungo. Ukuze uthole lapha, kufanele ukusizakala e Bangkok ngendiza, bese ngesikebhe, uyaphuma esuka Aow pier Trat sika.
9. Ihhotela I Dewa Koh Chang
Izivakashi ehhotela, eduze elikhulu Klong Prao Beach, indawo inikeza amakamelo nge kuvulandi ukuba sibe nombono ekhexisayo Gulf odumile Thailand. Kukhona ukufinyelela internet mahhala futhi 3 zokudla. Amakamelo ivulekile ezindaweni Uphahla lwangaphakathi eliphezulu. Ngaphezu kwalokho, bababukela ahlotshiswe ngesitayela wesimanje Thai. Ngamunye has a yokugezela elikhulu nge yokugezela yangasese ne-TV, it is olunikezwa amahhotela eziningi Koh Chang 4 izinkanyezi.
Izihambeli zalo resort - endaweni yokubhukuda ingqikithi m² 600, i-spa ukunethezeka izindawo zonke izinhlobo zemisebenzi okuthakazelisayo namanzi ezemidlalo. Ukuze ngawe yehhotela ukuvakasha edeskini ngeke ukuhlela izinkambo wendawo kanye nokuvakashela izindawo. Leli hhotela, nahlulele by ukubuyekezwa, kanye yokupaka khulula. Kulokhu, enkabeni lolwandle Kai Bae imizuzu engu-15 nje.
8. Ihhotela KC Grande Resort & Spa
The yokungcebeleka ka Koh Chang amahhotela ogwini Akunzima ukuthola. Ngakho, ihhotela four-star KC Grande kuyinto umzuzu nje kude ebhishi sandy emhlophe, okuthiwa Hat Sai Khao. Kuleli qophelo, ehhotela izivakashi - amakamelo nge internet mahhala futhi i-TV, ichibi, ejimini nezindawo zokudlela ezinhlanu. Kusukela kule ndawo yeholide engafinyelelwa ngaphakathi 2 amahora ngemoto futhi isikebhe esisuka Trat Airport. Kuyaphawuleka ukuthi izikebhe nisukele zinsika Kromaluang-Chumporn, Centre Point futhi Ao Thammachat.
Ihhotela - namakamelo abanzi, banikwa ifenisha ngokhuni. Banezinhliziyo ithala ukubukwa emangalisa izingadi ezindaweni ezishisayo noma olwandle. Amakamelo anemisila TV esiqandisini, ephephile futhi ikhebula. Izivakashi uyakhululeka enkulu ongaphandle spa pool, ngaphezu, sauna nokubhucungwa ngaleso spa. Ukwahlulela ukubuyekezwa, eziluzungezile ungaya Snorkelling, Canoeing, ukudlala i-volleyball ogwini. Ngaphezu kwalokho, inkonzo Shuttle kuya / kusuka esikhumulweni sezindiza, eziqashisayo car.
Esikhathini yokudlela wendawo ungazama ezihlukahlukene izitsha European futhi Thai uzilungiselele kwasolwandle fresh.
7. Ihhotela Sea View Resort & Spa Indawo
Sea View Resort itholakala imizuzu 5 nje kusukela Kai Bae (ebhishi). It inikeza izivakashi lapha - i ongaphandle indawo yokubhukuda bese amakamelo nge internet mahhala. Isevisi Shuttle (mahhala). Nakuba, ngasendleleni, le sevisi olunikezwa amahhotela eziningi Koh Chang, ukubuyekezwa zazo okwethulwa kulesi sihloko. Ukuze uhlele khulula yokupaka yangasese. Isigamu sehora idrayivu ihora isikebhe esibulalayo 1 - kusukela Trat Airport.
Zonke amakamelo ivulekile, Tastefully ehlotshisiwe, ifakwe TV, air conditioning ne esiqandisini. Phakathi Izinsiza - egumbini ephephile futhi mini-bar. Ngesikhathi nokulahla izivakashi - kuvulandi nge ukubukwa ulwandle zinkulu, njengoba kufakazelwa Izibuyekezo eziningi. yokugezela Private elineshawa nge bathrobes kanye hairdryer.
Ihhotela ivuliwe nizungeze edeskini iwashi reception. Kungenzeka i amasevisi Imali ilondolo etholakala lapha. I spa muhle massage okuphumuzayo. Abasebenzi edeskini ukuvakasha izokunikeza ulwazi oludingekayo ku ezikhangayo zendawo usuku uhambo.
Yokudlela ukhonza ezihlukahlukene bendabuko Thai ngamazwe cuisine, ukudla kwasolwandle, pizza eyosiwe, ngaphezu, ezihlukahlukene izitsha Italian. Kodwa ibha ukhonza ezihlukahlukene iziphuzo.
6. Ihhotela I-Emerald Cove
The yokungcebeleka ka Koh Chang amahhotela "5 izinkanyezi" zitholakala kalula. Ngokwesibonelo, i-Emerald Cove. Ihhotela itholakala eduze siqu lolwandle yayo yangasese. Ihhotela izivakashi - ichibi ongaphandle nge amazing ocean ukubukwa, spa izindawo, khulula ukufinyelela inthanethi futhi isikhungo ukuqina. Amakamelo anemisila TV, air conditioning, esiqandisini. Izivakashi ezivela minibar kungathatha isiphuzo, ngihlezi kuvulandi, kulungisile ngokugcwele. Encwadini yakhe yokugezela lalinezincwadi zokugeza kanye zokugeza yokuthopha kanye bathrobes.
inkonzo Shuttle kuya / kusuka esikhumulweni sezindiza nezinye izindawo, kanye ukubhucungwa opholile ihlelwe ngesicelo emhlabeni edeskini iwashi reception. Phakathi kwezinye Izinsiza ahlinzekwa kuleli hhotela - isitoreji umthwalo, kwedeski ukuvakasha kanye ebaleni lokudlala izingane. Ngo isikhungo yokupaka khulula.
Izivakashi ungaba ukudla at zokudlela yehhotela noma ukuphuza isiphuzo kusihlwa bar. Ukwahlulela ukubuyekezwa, wenza ukulethwa iziphuzo kanye nokudla egumbini. Ihhotela itholakala amakhilomitha 5.6 kusuka ebhishi, amakhilomitha 8.5 kusukela National Park futhi amakhilomitha 16 kusukela White Sand Beach.
5. Ihhotela Awa kuyona Koh Chang
Siyaqhubeka ukubuka amahhotela ethandwa e Koh Chang. Awa Koh Chang - kuba ehhotela, esemgwaqweni ogwini lolwandle endaweni engenabantu kulesi siqhingi. Izivakashi zehhotela internet mahhala futhi ichibi ongaphandle. Phakathi kweminye Izinsiza izivakashi e ukubuyekeza kwabo ukwaba air conditioning, satellite TV futhi flat-screen TV, zihlalo endaweni. Ngo yakhe Slippers futhi hairdryer yokugezela. Lelikamelo kubhavu noma eshaweni.
Izivakashi lesikhungo - ibha ZOKUBHUKUDA, indawo yokudlela, izingane club kanye spa kahle. Ngesikhathi edeskini izivakashi ulwazi phambi, inkonzo concierge. On indawo yokupaka mahhala. Lokhu resort itholakala amakhilomitha 2.6 kusuka ebhishi Unesizungu Futhi 7 amakhilomitha kusuka umuzana wokudoba. Beach Kai Bay ibanga 1.4 amakhilomitha.
4. Ihhotela Kacha Resort & Spa
Uma sikhuluma amahhotela e Koh Chang nge siqu lolwandle yayo yangasese, akunakwenzeka ingasaphathwa Koh Chang Kacha. Lapha amasevisi izivakashi 2 zokudla, 2 amachibi ongaphandle, pool ibha beach bar, inthanethi wireless endaweni yokwamukela izivakashi kanye yokupaka khulula. Zonke amakamelo abe-TV, ephephile futhi mini-bar, ngaphezu, has ithala yayo siqu ukubukwa emangalisa yensimu.
Izivakashi e-spa ungakwazi ukujabulela massage ogwini ukudlala ibhola, ejimini ukuzijayeza, kuyilapho ngesikhathi abathanda ongaphandle nethuba ukuya ehlathini, diving kanye ukukhwela izindlovu. Ihhotela Ubuye edeskini uhambo. Ekuseni yokudlela ukhonza kwasekuseni okumnandi, nge dinner kuyalungiswa imifino noma bendabuko cuisine Italy.
Ukwahlulela ukubuyekezwa, Koh Chang Kacha iseduze pier kunokuthula kulesi siqhingi. Ukuze uthole kusukela Bangkok ukuze resort, udinga ndizela Trat, kulandele isikebhe ukuze uthole pier e Koh Chang kusukela Trat.
3. Ihhotela Mercure Koh Chang Hideaway
Leli hhotela okunethezeka itholakala Bai Lan (Gulf). Ihhotela izivakashi - amakamelo zanamuhla isitayela Thai, Ukumnaka spa zokwelapha kanye ebhishi yangasese. Izivakashi can lounge ngasechibini ongaphandle enhle. On the indawo uhlinzekwa khulula internet ukufinyelela, ashiwo amahhotela eziningi Koh Chang ne beach lalo.
Ivulekile, yesimanje futhi elikhanyayo, amakamelo-moya ube balcony yangasese. Kwelinye igumbi ngalinye kukhona kungenzeka ukubukela i-TV. Kukhona ikhofi / itiye kanye minibar. Indlu yangasese ensuite has a ubhavu noma eshaweni. Ihhotela isendaweni yesibili ngobukhulu esiqhingini Thailand, amakhilomitha 44 kusukela Trat Airport kanye ihora emihlanu kusuka Bangkok. Parking khulula.
Ukwahlulela ukubuyekezwa, ungathola massage, spa, thini ashisayo kanye sauna. Izimenywa zingabelana maphakathi zebhizinisi uhlole i-imeyli futhi Amazing ejimini. Ihhotela has club yezingane. Kukhona amasevisi nomntwana. Emhlabeni inkonzo ikamelo iwashi. Esikhathini yokudlela lwendawo ukubukwa emangalisa kwechibi kolwandle futhi ukhonza cuisine omhlaba kanye Thai.
2. Ihhotela Nest Sense kuyona
Siyaqhubeka ukubuka amahhotela e Koh Chang. Ihhotela Nest Sense esisogwini lolwandle Lonely. Lapha izivakashi ezenziwa kumavila amakamelo nge internet mahhala, kwedeski hambo, ichibi infinity isevisi ilondolo. Futhi itholakala esizeni inikezwa khulula yokupaka yangasese. Ihhotela kuyinto 3.5 amakhilomitha kude umuzana wokudoba. amahora nesigamu wathatha uhambo oluya sezindiza.
I amakamelo anemisila iziteshi ikhebuli TV flat-screen, kuvulandi, efrijini. Ngesikhathi nokulahla izivakashi - endaweni ephephile futhi enezinto zokuhlala. It izici yokugezela nge eshaweni imvula. Ukwahlulela ukubuyekezwa, yokudlela ukhonza cuisine omhlaba kanye Thai.
1. Ihhotela I Aiyapura Koh Chang
Le ndawo yokudlela enombono ekhexisayo ethekwini Klong iNdodana itholakala esiqhingini Koh Chang. Izivakashi uphiwa yokuhlala endaweni ahlotshiswe bendabuko Thai isitayela kumavila amakamelo. Kukhona ukufinyelela khulula inthanethi kanye yokupaka yangasese.
I kumavila amakamelo ahlotshiswe e izikhungo Thai isitayela wesimanje. Ihhotela izivakashi - ithala ayimfihlo ukubukwa olwandle, i-DVD-player kanye nekamelo lokugezela zikanokusho ngaphezu kokuvamile. ukulethwa Ikhishwa iziphuzo kanye nokudla egumbini, inikeza ezinye amahhotela e Koh Chang. Ukufunda Izibuyekezo mayelana isikhungo, singabona ukuthi izivakashi ungakhululeka nge ukubhukuda echibini obishini, kanye zibabaza izimila ocebile.
Yokudlela wendawo ukhonza okumnandi eyosiwe kwasolwandle futhi cuisine Mediterranean kanye cuisine Thai.
Yokusetshenziswa "Dikloberla". "Dikloberl": intengo, ukubuyekezwa